AJA သည် KONA, Io နှင့် T-TAP အတွက် Desktop Software v15.5 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Aja KONA, IO နှင့် T-TAP များအတွက် Desktop ကိုဆော့ဝဲ v15.5 ဦးလွတ်မြောက်
Grass Valley, CA (နိုဝင်ဘာ 14, 2019) - Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ KONA, Io နှင့် T-TAP ထုတ်ကုန်များအတွက် HDX နှင့် 15.5K လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်များထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသော Desktop Software v8 အပြင် ၀ င်းဒိုးတွင်ဖန်တီးမှုလွတ်လပ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုတိုးမြှင့်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်များအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း®, Linux,® နှင့် MacOS®။ အင်္ဂါရပ်အသစ်များတွင် MacOS တွင်သတ္တုအထောက်အပံ့နှင့် MacOS Catalina နှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှု၊ VPID မှတဆင့် SDI ကိုကျော် HDR; နှင့် HDR စမ်းသပ်မှုပုံစံများအတွက် 8K / UHD2 / 4K / UHD / 2K /HD လုပ်ငန်းခွင်။ KONA5PCIe I / O ကဒ်အတွက် update သည် 2SI အပြည့်ထည့်သွင်းထားပါသည် SMPTE 8K များအတွက် raster ထောက်ခံမှု; 8K ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ကြည့်ခြင်းအတွက် RGB အထောက်အပံ့; မှတဆင့် 8K မှ 4K ကိုလျှော့ချနိုင်သည် HDMI.
Desktop ဆော့ဝဲ v15.5 သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသည့် HDR ပေါင်းစပ်ခြင်းအပါအဝင် NLE နှင့်အတူလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် လွန်စွာလိုလားသော Media Composer 2019.11 နှင့်မူလ 8K သို့မဟုတ် 4K (8K မှလျှော့ချ) Adobe Premiere Pro 2020 ဖြင့်ပြန်ဖွင့်သည်။ အဆိုပါ update ကိုလည်းထပ်ပြောသည် SMPTE AJA Io IP နှင့် SDI မှတဆင့် ST 2110-40 စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း လွန်စွာလိုလားသော Artist DNxIP နှင့် host တစ်ခုတည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော device များစွာအတွက် AJA NMOS အထောက်အပံ့။ ထို့အပြင် Desktop ဆော့ဝဲလ် v15.5 သည် Mac Pro အသစ်အပါအဝင် Mac workstations များ၌မြန်ဆန်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး၊ MacOS Catalina နှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်ခြင်း၊
●MacOS Catalina နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်မှု
●VPID မှတဆင့် SDI ကိုကျော် HDR
●UHD2 / UHD အတွက် HDR စမ်းသပ်မှုပုံစံများ /HD
●ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော HDR ပေါင်းစည်းမှု လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer
●အပြည့်အဝ 2SI SMPTE KONA 8 အပေါ် 5K များအတွက်အကြောင်းအရာအကြမ်းထောက်ခံမှု
●KONA 8 အပေါ် 5K ဖမ်းယူခြင်းနှင့်ပြန်ဖွင့်ဘို့အ RGB ထောက်ခံမှု
●8K မှတစ်ဆင့် 4K သို့လျှော့ချနိုင်သည် HDMI KONA5အပေါ်
●Adobe Premiere Pro နှင့်အတူ Native 8K or 8K မှ 4K သို့လျှော့ချထားသော output ကိုလျှော့ချ
●HDMI input ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတိုးတက်မှု
●ပန်ကာထိန်းချုပ်မှုအသစ်နှင့်ပန်ကာမြန်နှုန်းညွှန်ပြချက် AJA Control Panel ရှိ
●KONA5နှင့် KONA IP အတွက်အထောက်အပံ့များပါ ၀ င်သည့် DirectShow updates
●Windows အတွက်ပံ့ပိုးမှု®, Linux,® နှင့် MacOS®
Desktop ဆော့ဝဲ v15.5 ကို AJA's မှအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည် ထောက်ခံမှုစာမျက်နှာ.
လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော post ကိုထုတ်လုပ်မှု SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-11-15
ယခင်: Hitachi Kokusai မှ Z-HD5500 ကင်မရာများသည် Chelmsford TeleMedia အတွက်မိုဘိုင်းထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ပေးသည်